Mr Programmer (www.mr-programmer.com): April 2007
Posted by Mr. Programmer at 4/27/2007 02:34:00 PM2comments
Posted by Mr. Programmer at 4/24/2007 05:32:00 PM 1 comments
ကိုဖြိုးက Cbox မှာ Game tag send သွားတယ်ဆိုလို့ဘယ်ကို ပို့သွားတာလဲလို့စဉ်းစားလိုက်သေးတယ်။ ပြီးတော့မှ အော်အော် လို့ ဖြစ်ပြီးသိသွားရတယ်။
၁။ စိတ်ညစ်စရာတွေများလာရင် ချစ်ရတဲ့ မိန်းမ ကိုခေါ်ပြီး ကားလျှောက်မောင်းတယ်။
(အထူးသဖြင့် East Coast ကိုသွားလေ့ရှိတယ်။)
၄။ သိချင်တာရှိလျှင် ချက်ချင်းမေးတတ်တယ်။ ကိုယ်ပြောချင်တာဆိုလျှင်လည်း မလျှို့မ၀ှက်ပြောပြတတ်တယ်။ (လျှို့ဝှက်တက်တဲ့ မိတ်ဆွေများကို စိတ်ပျက်မိတယ်။)
၅။ မိမိလုပ်ပြီးသားကိစ္စတွေအပေါ် ဘယ်တော့မှ နောင်တမရဘူး။
၆။ ခေါင်းအရမ်းမာတယ်။ ဥပက္ခာပြုတတ်တယ်။
၈။ မန်ယူ ဘောလုံးအသင်းရှုံးသွားရင် အဲ့ဒီည မှာ အိပ်မပျော်တတ်ဖူး။ (ရှုံးသွားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို နှမြောလို့။)
၉။ မလိုချင်လို့ လွင့်ပစ်ခဲ့တဲ့ အရာအပေါ် ဘယ်တော့မှ လှည့်မကြည့်တတ်ဘူး။
၁၀။ ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်ရေးခြင်းကို အရမ်းနှစ်သက်အားကြီးတယ်။ (ဒီလိုနဲ့ပဲ ပရိုဂရမ်မာဖြစ်လာခဲ့တာ။)
ကဲကဲ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျနော်လည်းအောက်က မကြာခင်မှာ အိုတော့မယ့် ကိုရဲ နဲ့ မအိုသေးဘဲ US ကသူ့ချစ်သူကိုအနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ ညီမငယ် N3 နဲ့ သူ့ချစ်သူ သီဟ ကို ကျနော်က ပြန် tag လုပ်လိုက်ပါတယ်။
Posted by Mr. Programmer at 4/24/2007 10:21:00 AM 1 comments
Posted by Mr. Programmer at 4/23/2007 05:18:00 PM0comments
Posted by Mr. Programmer at 4/23/2007 12:24:00 AM0comments
Six people were killed and 71 injured during military-run Myanmar's raucous four-day water festival marking Buddhist New Year, state media reported Thursday.
Two revellers were killed and 42 injured during quarrels, while three people drowned, the New Light of Myanmar newspaper said.
Car accidents killed one and injured 29 during the Thingyan festival, which ran from April 13 to 16.
"As some revellers did not comply with the regulations, the undesirable accidents occurred during the festive period," the government-run paper said.
Thingyan offers the people of this isolated junta-run state the rare chance for mass public celebrations. Public gatherings are usually banned here.
Myanmar's authorities warned people not to shout political slogans or create unrest during the festival, and also urged people not to wear indecent clothing.
No political incidents were reported, but bikinis, mini-skirts and other skimpy and outrageous outfits could be seen across the capital.
A similar water festival takes place in neighbouring Thailand, where 361 people died in road accidents -- most caused by drink driving -- over the Buddhist holiday period.
Posted by Mr. Programmer at 4/19/2007 03:36:00 PM0comments
Posted by Mr. Programmer at 4/18/2007 04:02:00 PM0comments
ကျနော် ကြားရသလောက်တော့ ဒီနှစ် သင်္ကြန်ရန်ကုန်မှာ စည်ကားတယ်ဆိုပဲ။ တီးဝိုင်းတော်တော်များများကလည်းရန်ကုန်မှာပဲဆိုတော့ ကဲလို့ကောင်းနေကြမှပေါ့။
Posted by Mr. Programmer at 4/16/2007 04:07:00 PM0comments
ကျနော်ကို ကျနော့်မိတ်ဆွေတစ်ဦးက အီးမေးလ်နဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံလှမ်းပို့လိုက်ပါတယ်။
Whataloving and caring couple.Whatarespectful tradition to parents in law.Whatashameful and disgrace civil servants.Whatafunny fashioned lady she is....
Posted by Mr. Programmer at 4/16/2007 01:26:00 PM0comments
မြန်မာမင်းသမီး မော်ဒယ်များရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ဓာတ်ပုံများ။
အခုတလော ရန်ကုန် အနုပညာလောကတွင် ကိစ္စတစ်ခုအလွန် ခတ်စားနေသည်။ တစ်ခြားမဟုတ် မင်းသမီးများ၊ မော်ဒယ်များ ဖော်လှန်ပြ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံခြင်းပင်။
ကျနော် သူတို့ဘာစိတ်ကူးနှင့်ရိုက်သည် ကို မသိပါ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်သာသိပါမည်။
Posted by Mr. Programmer at 4/13/2007 12:34:00 AM2comments
Posted by Mr. Programmer at 4/13/2007 12:09:00 AM0comments
Private car owners in the southeast Asian nation, which has been under military rule for 45 years, are allowed to buy 60 gallons of fuelamonth at 1,500 kyat ($1.22 at black market rates) per gallon from state-owned filling stations.
If they need more, they have to resort to the black market, where petrol is currently selling at about 4,200 kyatagallon.
Posted by Mr. Programmer at 4/12/2007 11:49:00 PM0comments
Posted by Mr. Programmer at 4/09/2007 04:01:00 PM3comments
မိမိအိမ်ထောင်ဖက်သည် နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက Deposit S$500 ပေးရမယ့် စင်ကာပူရှိမြန်မာသံရုံး။
ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကျနော်ကိုအကူအညီတစ်ခုလာတောင်းပါတယ်။
ဘာအကူအညီလဲဆိုတော့ သူ့ အမျိုးသမီးရန်ကုန်ပြန်လျှင်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတာပါ။ သူက စင်ကာပူနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားပြီးဖြစ်ပြီး သူ့အမျိုးသမီးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ရှိနေဆဲပါ။
မကြာခင်မှာပဲသူကျနော်ကိုပြန်ခေါ်ပါတယ်။ ကျနော်အထင်တော့ အဆင်ပြေသွားတဲ့အတွက်ဝမ်းသာကြောင်းကျေးဇူးတင်စကားပြောမယ်လို့ထင်ခဲ့မိပါတယ်။
ဒါပေမယ့်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက " သူငယ်ချင်းရေ ငါ့မိန်းမရန်ကုန်ပြန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ် သံရုံမှာ စရံငွေ S$500 ထားခဲ့ရမယ်တဲ့ "။
Ooops ထူးဆန်းပါပေ့ မြန်မာသံရုံရယ်။
Posted by Mr. Programmer at 4/09/2007 01:02:00 PM3comments
ကျနော်ဒီနေ့ မြန်မာသတင်းစာကိုဖတ်တော့ ငါးမင်းဆွေဆိုလား ဖားမင်းဆွေ ဆိုလား သူရေးသည့် “ဖားမင်းဆွေ စက်ဘီးစီးနေသည်၊ လမ်းဘေးဖုန်းကို သုံးနေသည် ” ကိုဖတ်မိပြန်ပါသည်။သူ့ကို သူ့ရဲ့အသိမိတ်ဆွေက ပြည်ပတွင်ထုတ်ဝေသည့် အင်တာနက်ဂျာနယ်ဖြစ်သည့် မဇ္ဈိမဂျာနယ်တွင်ပါသည့် သူ့ဆောင်းပါးအကြောင့်ဝေဖန်ထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အကြောင်း သူထံသို့ပြောပြကြောင်းနှင့် သူသည် အင်တာနက်ကိုကြားသာကြားဖူးသည် မကြည့်ဖူးကြောင်းပြောထားပါသည်။ကျနော်နားလည်ထားသည့်် မြန်မာနိုင်ငံမှ အင်တာနက်မှာ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ Web Sites တွေကို ပိတ်ထားရက်နှင့် သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကဘယ်လို ဘယ်နည်းနှင့် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်ကို နားမလည်မိပါ။ သူပြောသည့် သူ့မိတ်ဆွေဆိုသည်မှာ အစိုးရမှ အကောင်းကြီးကြီး သတ္တ၀ါလား။ မသိပါ။ ဒါမှ မဟုတ် အခွင့်ထူးခံလူတန်းစားလား။
နောက်တစ်ခုမှာ ထမင်းငတ်တဲ့ဗိုက်က ကျည်ဆန်မကြောက်ဘူး ကိုသူကရှင်းပြသွားပါသည်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ရှင်းပြပုံမှာ တချိန်က ဦးနေ၀င်းပြောခဲ့သော စစ်တပ်က ပြစ်ရင် တည့်တည့်ပြစ်တယ် ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်နေသည်။ လူတစ်ယောက်ကို အခန်းထဲတွင် ၂ ရက်ခန့်ထည့်ထား၍ ထမင်းငတ်ခံခိုင်းကာ သေနတ်နှင့်ပြစ်သတ်သေရန် ပြောထားသည်။သူသည် သူ့ကိုဝေဖန်ထားသည့်ဆောင်းပါးကိုနားမလည်၍လားမသိပါ။လူတစ်ယောက်လက်ထဲတွင် ထမင်းပန်းကန်နှင့် သေနတ် တစ်ဖက်ဆိုပါက ထမင်းရှိနေ၍ ကျည်ဆန်မကြောက်ပဲ ထမင်းရရှိ၍ သေ၀ံပုံကို သူနားမလည်ပဲ အာဏာရှင်လုပ်ရပ်တွေသာ သူဆီမှာ ဘာလို့ရှိနေပါသလဲ။
သူ့ထံတွင် လယ်များ၊ ငါးကန်များ ပိုင်ဆိုင်သောလယ်သမား တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တွင် အိမ်ခန်းများ၊ လုံးချင်းတိုက်များ၊ကား နှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပြောထားပါသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် လုပ်ငန်းတိုးချဲ့လို၍ ရောင်းချလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုသည်။
အောက်ဆုံးတွင်တော့ ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ဖြစ်သော သူသည် ကိုယ်ပိုင်ကားမစီးကြောင်း၊ လက်ကိုင်ဖုန်းမကိုင်ပဲ လမ်းဘေးဖုန်းကို သုံးနေပါသည်ဟုဆိုပြန်သည်။ နားမလည်ပါ။
Posted by Mr. Programmer at 4/07/2007 06:24:00 PM2comments
ရင်သား ကင်ဆာကိုကွန်ပျူတာ အသုံးပြု၍ရှာခြင်းထက် လူသားကပိုမိုထိရောက်။
Computer-aided mammography finds breast cancers no better than the human-read kind, and it prompts more unnecessary biopsies, saidastudy out Thursday.
"The use of computer-aided detection is associated with reduced accuracy of interpretation of screening mammograms," said the study published in the the New England Journal of Medicine.
"The increased rate of biopsy with the use of computer-aided detection is not clearly associated with improved detection on invasive breast cancer," said the study of 429,345 mammographies in 43 US medical centers, which detected 2,351 cancers between 1998 and 2002.
The study is the largest yet to compare the two systems. The computer-assisted machines detected 4.20 cancers for every 1,000 women, while the old method found 4.15 per 1,000.
However, the computer-aided detection led to 20 percent more biopsies of suspected tissue which turned out to be negative.
On the other hand, the computer assist found less-dangerous cancers than the simple mammography, said Joshua Fenton, of the University of California at Sacramento, one of the study's authors.
"The results of this study will surprise and disappoint most mammographers," said Ferris Hall, of the Beth Israel Deaconess Medical Center.
"They constituteasubstantial hit to this technology," he said.
The equipment from R2 Technology Inc., Kodak and iCAD Inc. costs some 150,000 dollars.
The US Food and Drug Association authorized the technique in 1998.
Some 24 million mammographies are performed in the United States every year. Between 15 and 30 percent of hospitals have adopted the computer assisted systems.
Medicare, the US medical system for retirees and the handicapped, pays an additional 20 dollars per mammography, when it is computer assisted.
Hall wrote that the financial incentive was approved "byaheavily lobbied Congress, despite little evidence-based data in support of its value at the time."
Posted by Mr. Programmer at 4/07/2007 02:29:00 AM0comments
Posted by Mr. Programmer at 4/05/2007 10:41:00 AM3comments
A Singaporean father made up his own rules and demanded to have sex with his daughters. His wives, who allowed him to do so, will receive sentencing from the court in two weeks' time. The women are on trial for persuading six of their young daughters, aged between 12 and 15, to have sex with their natural father from 2004 to 2005. The three mothers had pleaded guilty and were supposed to be sentenced on Wednesday. But sentencing was adjourned because the judge wanted more information on the mental state of the victims. Based on the findings, Defence Counsel Wee Pan Lee argued that it is important for the mothers to be present to provide support for the victims. But Deputy Public Prosecutor Eugene Lee said the mothers did not perform their duty in protecting their daughters, resulting in two of them going through abortion. The father,a46-year-old businessman and religious teacher, is now servinga32-year and 24-stroke sentence.
Posted by Mr. Programmer at 4/05/2007 09:48:00 AM0comments
Posted by Mr. Programmer at 4/04/2007 03:13:00 PM3comments
သားသမီး ရယူလိုကြသည့် ယောက်ျားများသည် ရေပူကို တာရှည်ရေချိုးခြင်း များရှောင်ကြဉ်သင့်ကြောင်း ယောက်ျား များ မျိုးအောင်ခြင်းအပေါ် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လေ့လာသုံးသပ်ချက်က ဖော်ပြသည်။ သုံးနှစ်ကြာခဲ့သည့် ရှေ့ပြေး စမ်းသပ်မှုတွင် ယောက်ျား ၁၁ ယောက် ပါဝင်ခဲ့ရာ ရေပူချိုးခြင်းသည် ယောက်ျား တစ်ဦးအတွက် မြုံသွားနိုင်သည့် အလားအလာရှိသည်ဆိုသော ယုံတမ်း စကားသည် အနည်းနှင့်အများ မှန်နိုင် ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Posted by Mr. Programmer at 4/04/2007 12:11:00 PM 1 comments
Posted by Mr. Programmer at 4/03/2007 04:39:00 PM3comments
Posted by Mr. Programmer at 4/03/2007 01:51:00 PM2comments
Posted by Mr. Programmer at 4/03/2007 11:13:00 AM0comments
Posted by Mr. Programmer at 4/02/2007 03:56:00 PM2comments
Posted by Mr. Programmer at 4/02/2007 11:55:00 AM0comments
စင်္ကာပူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာ။
ယနေ့ စင်္ကာပူဆိုင်ရာ သတင်းများအရ စင်္ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr George Yeo နှင့် အရာရှိကြီးများသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆိုသူ ဦးဥာဏ်ဝင်း၏ဖိတ်ခေါ်ချက်အရ ယနေ့မနက်တွင်ထွက်ခွာသွားပြီး ၃ရက်ကြာမည်ဟုဖော်ပြထားတယ်။ ၄င်း၏ခရီးစဉ်တွင် အတွင်းရေးမှု (၁) နှင့် လည်းတွေ့ဆုံမည်ဟုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီ သတင်းကို ဖော်ပြတာလည်းဆိုတာကတော့ ဘာလို့သူအခုမှချက်ချင်းကောက် သွားတာလဲဆိုတာစဉ်စားမိလို့ပါ။ အထူးသဖြင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံ မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေထံမှ အခွန်နှစ်ထပ်ကောက်ခံမှုအကြောင်းကို မီဒီယာများတွင်ပါရှိပြီး နောက်မှ ထွက်ပေါ်လာဖြင်းဖြစ်သ၍ အထူးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။
တကယ်လို့ George Yeo သွားတာအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ဆိုရင်တော့ အားလုံးဝမ်းသာရမယ့် သတင်းဖြစ်ပါကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်။ ဒါမဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကို စင်္ကာပူမှ မွေးစားသားလုပ်နေလို့လားဆိုတာတော့မသိပါဘူး။
Posted by Mr. Programmer at 4/02/2007 11:12:00 AM4comments